မန ္တလေး မှာ ဖယောင်းတိုင်နဲ့ ဆန္ဒပြ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » မန ္တလေး မှာ ဖယောင်းတိုင်နဲ့ ဆန္ဒပြ
မန ္တလေး မှာ ဖယောင်းတိုင်နဲ့ ဆန္ဒပြ
Posted by ဘဲဥ on May 20, 2012 in Myanma News, News | 40 comments
73 လမ်း ၊ 26 လမ်ူဒေါင့် ကဲ ဇော်မင်း ဆိုတဲ့ ကောင်ရေ့ မင်းဘာဆက်လုပါပေးမှာလဲ ၊ တောင်းဆိုတဲ့သူတွေက တောင်ကုန်ပြီနော်။ မသိချင်ယောင်ဆောင်မနေနဲ့။ ကိုယ့်အိပ်ကပ်ထဲပဲထည့်မနေနဲ့ ပြည်သူတွေကိုလည်း ပြန်ကြည့်အုံး
ငါ့စကား နွားရ ပြောခဲ့တာပါ
အဲဒီဝန်ကြီး ရှက်တက်ရင် လဲသေဖို့ကောင်းတယ်
ခုလိုတွေ ဖြစ်နေတာ..သူပြောခဲ့တဲ့ စကားအတွက်
သူဘယ်လို တာဝန်ယူမလဲ.. ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ
တကယ် အရည်အချင်း မရှိပဲ သိချင်ယောင်ဆောင် နေတယ်။
သူ ့ထက်သိတဲ့ သူမရှိဘူးလို ့အရှက်မရှိပြောတာဟာ
ပညာရှင်တွေ နဲ့အစိုးရအဖွဲ ့တစ်ခုလုံးကို စော်ကားတာပဲ။
သူမို့အရှက်မရှိ ရာထူးကို မစွန် ့သေး ဘူး။
မနေ့မီးက ည ၉ နာရီကျော်မှလာတယ်အေ့
ရန်ကုန် စက်မှု့ဇုံတွေမှာလဲ ၂၁-၅-၁၂ နေ့ကစလို့
စံနစ်တဲ့…(မန္တလေးကို အားကျမခံ ကြွားတာ)
မြို့ကြီးတွေမှာ မီးပျက်တယ် ဆိုတာ ကမာ္ဘ့အလယ်မှာ အင်မတိအင်မတန်
ကျက်သရေယုတ်တဲ့ ကိစ္စ သာဖြစ်တယ်။
အော် ……. သမ္မတကြီးတွေက အဖျက်သမားတွေနှိမ်နှင်းတယ်သာဆိုတယ် …… မီးဖြတ်တဲ့လူတွေကိုကျ တော့ ယခုအချိန်အထိ ပိုင်နိုင်စွာ မနိုင်နင်းနိုင်သေးဘူးနော် …….
ဇော်မင်းကြောင့် ဖယောင်းတိုင်ထွန်း ဆန္ဒပြတာ ထက် တခြားနည်းလမ်းရှာသင့်ပါတယ်။
ဖယောင်းတိုင်ဈေးတက်ရင် လူတွေဒုက္ခပိုရောက် ကုန်ပါအုံးမယ်။
ှုုုုုဦးဆောင်သူတွေ နည်းနည်းစဉ်းစားဖို ့လိုနေပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ မြို့မှာလည်း ၎င်းအတိုင်းပါပဲ ဗျာတို့
လွန်ခဲ့သော နှစ်ရက်ခန့်က လည်း သုံးခွမြို့နယ်တွင်
လူအယောက် (၂၀ဝ ) ခန့် ဖယောင်းတိုင်များကိုင်ပီး ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည် ….
နေ့ခင်းဘက် မီးမရပေမယ့် ညဘက်လေးတော့ ပေးသင့်တာပေါ့…
ည ၁၂ နာရီအချိန်လောက်မှမီးကလာတယ် ..မနက် လူတွေ မနိုးခင် ပျက်တယ် …
ခု ဖယောင်းတိုင်နဲ့ သုံးခွမှာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပေးပီး တည်းက နှစ်ရက်ရှိပီ ညဘက်လာတယ် …..
နေ့ခင်းဘက်ကတော့ မိုးနတ်မင်းကြီး ဆုတောင်းရမယ်ဆိုပဲ ….
ချီတက်လို့လည်းပြီးရော ည 11 နာရီ ကမီးစလာတယ်ဗျာ အရင်လို မဟုတ်ဘူး
မျက်တောင်တစ်ခတ်တောင်မပျက်ဘူးဗျို့ ၊အခုနေ့လည် 11 နာရီထိလာတုန်းဗျို့
ရှူးဂါးမရေ့ သများတို့ ရပ်ကွက်ကတော့ အေးဆေးပဲ တစ်ညလုံးမလာလိုက်တဲ့မီး မိုးလင်းလို့ နေ့လည်ပိုင်းရောက်တဲ့ အထိကို အရိပ်အရောင်မတွေ့ရဘူး
ညည ရေထတင်ရတဲ့ ဘဝ
ကိုသကြားပြောသလို မီးလာတယ်ဆိုလို့ဝမ်းသာပါဒယ်.
အူးလေးတို့မန်းလေးသားတွေ ဖယောင်းတိုင်ထွန်းလိုက်တာနဲ့ကျနော်တို ့ရန်ဂုန်မှာ မနက်ထဲက မီးပျက်သွားပါပကောဗျာ
ကျနော်တို့ဖယောင်းတိုင်ထွန်းလိုက်ရင် ဘယ်မှာ ကိုယ်တာလျော့ပြီး ဖြတ်မလဲမသိ
ကိုပေ ရေ. ပြည်သူတွေစုနေတဲ့ နေရာတော့ နီယွန်မီးဖွေးနေသဗျ။
တလောက သစ်ထူးလွင်ဆိုဒ်က အပြုတ်ဝံဂျီး(၅)ယောက်မှာ ငဇော်မင်း
ပါနေလို ့ဝမ်းသာနေတုန်း အဲသတင်းက မှန်မလာဘူးဗျာ
How good these snapshots are, Mr. Egg. Thank u.
မန်းမှာမီးလာလို့ ရန်ကုန်မှာ မီးပျက်သွားပြီ။
တနိုင်ငံလုံး.. နေ့စဉ်မီးလာတာကိုရွေးမလား… ?
ကျနော်သိတာက မြစ်ဆုံ ကစ္စက ထွတ်လာတဲ့ လျှပ်စစ်ကို တရုတ်က ၉၀% မြန်မာက ၁ဝ % ဘဲရမှာနော်….
သဂျီး ကွန်မန်း ပြောင်းသွားပြီ။
ဒါပေမဲ့.. ခုတလော.. မြစ်ဆုံတင်မဟုတ်.. မြန်မာပြည်အနှံ.. ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေပါမကျန်.. လျှပ်စစ်ထွက်နိုင်သမျှ စီမံကိန်းအားလုံးလိုလိုဆန္ဒပြတာ ခေတ်စားနေတာနဲ့.. ပြန်ပြင်မေးလိုက်တာပါနော..
တဂျီးမင်းနော် ရန်မစနဲ့ဗျ (ဟီးးး အလဂါးနောက်ထှာနော် စိတ်အချိုးရဘူးတိရား)
ဒီမေးခွန်းကို လုံးဝ(လုံးဝ) ကန်ကွက်ပါတယ် .. x-(
မန္တလေးမြို့တွင် လျှပ်စစ်မီးပြန်လည်ရရှိလိုမှုကြောင့် ဆန္ဒပြပွဲများဖြစ်ပေါ်ခဲ့သဖြင့် ညတွင်းခြင်း အရေးပေါ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအား မန္တလေးတိုင်းလျှပ်စစ်ရုံးဝင်းအတွင်း ချက်ချင်းကျင်းပပေးခဲ့သည်။
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လျှပ်စစ်နှင့်စက်မှုလက်မှုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ကြူမှ လျှပ်စစ်မီးများ အဆင်ပြေအောင် မလုပ်ပေးနိုင်လျှင် ရာထူးမှ နှုတ်ထွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြစ်မခသို့ ပြောကြားသွားသည်။
“ ကျွန်တော့်တာဝန်ကတော့ ရလာတဲ့လျှပ်စစ်မီးကို ညီတူညီမျှရအောင် လုပ်ပေးရမယ့်တာဝန် ရှိပါတယ်။ အဲဒီတာဝန်ကို မကျေရင် ကျွန်တော် ထွက်မှာပါ ´´ ဟု ဒေါက်တာမြင့်ကြူက ပြောကြားသည်။ မုတ်သုန်ရာသီဝင်ရောက်လာပြီဖြစ်၍ ယခုထက်စာလျှင် ပိုမိုပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲသို့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လျှပ်စစ်နှင့်စက်မှုလက်မှုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မြင့်ကြူ ၊ မန္တလေးတိုင်းလျှပ်စစ်ရုံးမှ တိုင်းအင်ဂျင်နီယာဖြစ်သူ ဒေါ်အေးအေးမင်းနှင့် အခြားတာဝန်ရှိ သူများတက်ရောက်ခဲ့သည်။
ယခုကဲ့သို့ လျှပ်စစ်မီးများမပေးနိုင်ခြင်းသည် ကေအိုင်အေမှ ရွှေလီမှလာသော လျှပ်စစ်မီးတန်းများ သွယ်တန်းရာ တာဝါတိုင်များကို ဖျက်ဆီးခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုလည်း ၎င်းတို့က ဖြေရှင်းချက် ပေးခဲ့သည်။
မန္တလေးမြို့လျှပ်စစ်မီးများ ယခုထက်ပိုမိုပေးဆောင်နိုင်ရန်အတွက် မီးစက်(၁၀)လုံး ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်ပြီး အရေးကြီး သည့်နေရာများတွင် သာ တပ်ဆင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ဒေါ်အေးအေးမင်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
“ရုံးချုပ်က ကျမတို့ဆီကိုပို့ပေးပါတယ် ၊ ရပ်ကွက်တွေက ထရန်စဖာမာတွေရဲ့ခြေရင်းမှာ ချပေးထား မယ် ၊ ကျမတို့လဲ ပေးချင်ပါတယ် ၊ အခြေအနေရက တစ်နိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်နေတာပါ ၊ လုပ်ငန်းပဲ သုံးသုံး ဘာပဲသုံးသုံး အပြည့်ပေးချင်ပါတယ်။ ကြိုးစားပြီးမျှတအောင် ဆောင်ရွက်သွားပါမယ် ´´ဟု ဒေါ်အေးအေးမင်းက ပြောသည်။
၂၀၁၂ခုနှစ် မေလ(၂၀)ရက်နေ့ ည(၇)နာရီအချိန်တွင် မန္တလေးမြို့၌ လျှပ်စစ်မီး(၂၄)နာရီပြန်လည်ရရှိလိုမှုဖြင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်ပွဲကို မြို့နေလူထုက စုပေါင်းဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ပြသခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါဆန္ဒပြပွဲကို (၂၆)လမ်းနှင့် (၇၈)လမ်းထောင့်ရှိ မန္တလေးတိုင်းလျှပ်စစ်ရုံးရှေ့တွင် စတင်ကျင်းခဲ့ပြီး ထိုမှတဆင့် ကျုံးဘေးတစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်ကာ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ပြသခဲ့သည်။
ထိုဆန္ဒပြပွဲတွင် လူဦးရေ(၃၀၀၀)ကျော်ပါဝင်ခဲ့ပြီး အလွှာပေါင်းစုံ အရွယ်ပေါင်းစုံပါဝင်ပူးပေါင်းကာ ဖယောင်း တိုင်များကိုင်ဆောင်ပြီး ကြွေးကြော်သံအချို့ကို ကြွေးကြော်ခဲ့ကြသည်။
“ မန္တလေးမြို့ကြီးကို နှစ်ဆယ့်လေးနာရီမီးရချင်လို့ ခုလိုလာရောက်ပါဝင်တာပါ ´´ ဟု မန္တလေးမြို့ ဒေဝန်း အရှေ့တွင်နေထိုင်သူ အသက်နှစ်ဆယ်ကျော် အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ပြောသည်။
မန္တလေးမြို့တွင် ပြီးခဲ့သည့်သင်္ကြန်နောက်ပိုင်းမှစတင်ကာ မီးပျက်မှုပိုမိုဆိုးရွားလျှက်ရှိပြီး ထိုကဲ့သို့ မီးပျက်မှု ကြောင့် လူအများ ရာသီဥတုဒဏ်ပိုမိုခံစားရခြင်း ရေလုံလောက်စွာမရရှိခြင်းများကို ကြုံတွေ့နေရခြင်းများ ကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ဆန္ဒပြပွဲများ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
“ အမှောင်ထဲမှာ နေနေရတာပါ ၊ မီးမလာလို့ ရေလဲမလာဘူး ၊ ရေမလာတဲ့အတွက် အဲဒီရေကို ညနက်သန်းခေါင်ထိ ထိုင်စောင့်ရတယ် ၊ ကျနော်တို့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ သဘာဝသယံဇာတတွေ အရင်းအမြစ် တွေကို နိုင်ငံခြားရောင်းစားနေပြီး ကျနော်တို့မြန်မာနိုင်ငံ သားတွေကြတော့ ကိုယ့်ရဲ့ လူ့အစွမ်းအား အရင်းအမြစ်တွေက အလကားနေအလကား ဆုံးရှုံးနေရတယ် ´´ ဟု ရွှေလှံရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သော အမျိုးသားတစ်ဦးက ကျုံးဘေးဆန္ဒပြပွဲတွင် ပြောပြသွားသည်။
မန္တလေးမြို့တွင် ခြောက်နာရီလာ ဆယ့်နှစ်နာရီပျက်စံနစ်ဖြင့် မီးများပေးလျှက်ရှိပြီး တောင်ကြီး ၊ နေပြည်တော် တို့တွင် မီးလုံးဝပျက်ခြင်းမရှိကြောင်းသိရသည်။
ဆန္ဒပြသူများသည် မန္တလေးတိုင်းလျှပ်စစ်ရုံးရှေ့ ၊ ကျုံးဒေါင့်ဆီဒိုးနားဟိုတယ်ရှေ့နှင့် တရုတ်ကောင်စစ်ဝန် ရုံးများရှေ့သို့ သွားရောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီး ယခုလိုဆန္ဒပြမှုကို တစ်စုံတရာ အရေးယူခြင်းမရှိကြောင်းကိုလည်း တွေ့ရသည်။
သစ်ထူးလွင် မှာတွေ့တာလေး ကူးပေးလိုက်တယ်
တော်သေးတယ် သများဒို့ ဝန်ဂျီးက မရှက်တတ်လို့
ဒီဝန်ကြီး ကိုတော့ ့သဘောကျ၏။မလုပ်နိုင်လျှင်ထွက်. ဒါပြည်သူ ့အတွက်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ဆောင်ပေးသင့်တဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲစရာတွေကို အများဆန္ဒနဲ့ စုပေါင်းဖော်ထုတ်ပြသ တဲ့ အလေ့ အကျင့် ကောင်းတစ်ခုပါပဲ ။ အားပေးကြိုဆိုတယ်ဗျာ။
**မြန်မာ့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးလုပ်ငန်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ ဒေါ်အေးအေးမင်းက ”မန္တလေးမြို့ လျှပ်စစ်မီးပိုမို ရရှိဖို့အတွက် ရုံးချုပ်ကို မီးစက်တွေ မှာထားပါတယ်။ ကျွန်မတို့အနေနဲ့ ပေးချင်ပါတယ်။ ပေးစရာမရှိလို့ကို မပေးတာပါ။ မန္တလေးမြို့ လျှပ်စစ် မီး ပိုမိုရရှိဖို့အတွက် မိုးနတ်မင်းကြီးကိုသာ ဆုတောင်းကြပါ”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ **
သူကြီး ကွန်မန်းတွေထဲ ဒီတခုတော့ အကြိုက်ဆုံးပဲ (အကြိုက်ဆုံး) ….:)
တယူနစ် ၄၈ဝ ရနေလို့ .. မီးမပျက်အောင် အထူးဂရုစိုက်နေပုံရတယ်…..။
အဲ.. မနေ့က ဆန်ဒ ပြတာမကြည့်လိုက်ရဝူးဗျ.. နာတယ်..
ကျွန်တော့ သူငယ်ဂျင်းကြီးပြောတာတော့ တော်တော်လန်းတယ် ချိုပဲ…. ရှော့ပင်လေးတွေနဲ့တဲ့.. (ဟဲ.. ပူလို့လားတော့မတိဝူး….. စတာနော်)
ဆန်ဒ ပြတာတော့ ကိစန မရှိပါဘူးကွယ်…တော်ကြာ ဖယောင်းတိုင်မီးမြင်ပြီး.. ဒီလိုလည်း အဆင် ပြေသားပဲ တွေးနေရင်တော့…. အင်း.. (ဖယောင်းတိုင်လေး ဝယ်ထားဦးမှ)
EPC ကဝန်ကြီးတွေနေပြည်တော်ကောခွဲတမ်းမီးနေလား။ နေပြည်တော်မီးဘယ်လိုသုးံတယ်ဆိုတာမရှင်းပါလား။